I-Fujifilm X-E3, ikhamera yeengcali ezifuna ubunzima obuncinci | Iindaba zeGajethi
UFujifilm unika ilungu elitsha kwikhathalogu yekhamera engenazibuko. Entsha UFujifilm X-E3Ikhamera edibeneyo eyonwabela izinto ezinomdla kunye noyilo olukumema ukuba uyisebenzise yonke imihla. Ngapha koko, njengakwi- IOlimpus OM-D E-M10 uMark III, inokuba liqabane lakho lokuhamba ngokugqibeleleyo. Kakade ke, ixabiso layo ngaphezulwana.
Into yokuqala ekufuneka uyiqaphele kukuba uyilo lwayo lulumkele kakhulu, njengoko bekuqhelekile kwinkampani yaseJapan. Yintoni egqithisile, Ungayifumana le Fujifilm X-E3 ngee-shades ezimbini: emnyama okanye isilivere. Okwangoku, yikhamera eya kuthi ibe nembonakalo yokujonga kunye nescreen. Kwimeko yokugqibela, sithetha nge Iphaneli eyi-intshi ezi-3 enobuchule bokuchukumisa ukusukela kuyo ukuthatha iifoto, ukugxila okanye ukusondeza kubambe ngokungathi siselfowuni. Ewe kunjalo, esi sikrini sinokubuyela umva: static; Oko kukuthi, ayisongeli ukuze sikwazi ukufumana okungakumbi xa sifuna ukuthatha iifoto ezinzima.
Kwelinye icala, ukubheja kweFijifilm X-E3 kwisenzeli kunye neprosesa yomfanekiso ovela koodade bayo abadala. Sithetha ngayo I-24,3 megapixel APS-C X-Trans CMOS III inzwa kunye ne-X-processor ye-Pro yokuqhuba umfanekiso Isantya esiphezulu. Kwakhona, ialgorithm ye-autofocus iphuculwe ukuze ifake imifanekiso eshukumayo, ifezekise ukugxila kwemizuzwana eyi-0,06.
Okwangoku, icandelo loqhagamshelo ligqunywe. Uya kuba ne-HDMI port yokuqhagamshela ikhamera ekubekeni esweni okanye kumabonwakude wangaphandle. Kananjalo, yintoni Le Fujifilm X-E3 yikhamera yokuqala yenkampani yokudibanisa uqhagamshelo lwebluetooth yamandla asezantsi. Kutheni ufuna le nto? Ukwenza ukuba ikhamera ihlale iqhagamshelwe kwiselfowuni okanye ithebhulethi kwaye igqithise zonke iifoto okwangoku.
Okokugqibela, kwinxalenye yevidiyo, iFujifilm X-E3 iya kuba nakho ukwenza iziqwengana kwi4K kwi-29.97p, 25p, 24p, 23.98P. Kwaye ividiyo kumgangatho opheleleyo we-HD kwii-59.94 fps, 50 fps, 29.97 fps, 25 fps, 24 fps and 23.98 fps. Le khamera ziya kufumaneka ekupheleni kwale nyanga kaSeptemba. Ixabiso lomzimba liya kuba yi-899 euro. Ngelixa ikhithi ene-lens ye-XF18-55mm iya kuthengisa nge-1.299,95 i-euro kwaye ikhithi ene-XF23mmF2 R WR lens iya kuthengisa nge-1.149,95 euros.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Ukufota » UFujifilm X-E3, ikhamera yeengcali ezifuna ubunzima obuncinci
UGoogle ubhengeza ukuphela kweapp yeGoogle Drayivu yeMac kunye nePC